Isimada PL ee shirka dasturka Muqdisho
4 May 4, 2012 - 8:24:33 AM
Garoonka diyaaradaha magaalada Gaowe ayaa maanta 04,May 2012 waxa ka anbabaxay isimada Puntland qaaar kamid kuna sii jeedey magaalada Muqdisho ,waxana ay ka qaybgalayaan shirka odayaal dhaqameedyada Soomaaliyeed uga furmaya Muqdisho dhowaan.
Isimada Mudisho u dhoofey ayaa matalaya dhamaan shacabka iyo qaybaha kala duwan ee degta Puntland,waxana qayb ka yihiin ergada odayaal dhaqamedyada oo guud ahaan taradoodu dhantahay 135 oday.
Taliyaha ciidamada difaaca Puntland Gen.Siciid Maxamed Xirsi Siciid Dheere iyo Agaasimaha guud ee madaxtoyada Puntland Dr.Jaamac Warsame ayaa sidoo kale qayb ka ahaa wafdigan u anbaxay Muqdisho.
Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo u hadlay odayaasha ayaa ka warbixiyey ujeedka safarka iyo wafigan si uu yahay.
‘’Waxaa halkan ka baxaya isimada Puntland oo raba inay ka qaybagalaan nabadeynta Somalia shirka ka dhacay xamar iyo sidii looga bixi lahaa KMGnimada’’ ayuu sheegey Suldaan Siciid Maxamed Garaase.
Wasiiro xukuumadda ka tirsan sida Maaliayada Faraax Cali Shire,Hawlaha guud Eng.Daahir Xaaji Khaliif iyo weli Duulista hawada iyo garoomada Puntland Gamuute ayaa sii dhaweyey wafdigan Muqdisho u aadey shirka odayaasha dhaqanka.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa dhowanahan ku sii qulqulayey ergada ka qaybgalaysa shirka odayasha dhaqanka oo soo xulaya iyagu xubnaha ansixinaya dastuurka Somalia 15,May hawshiisu bilaabmeyso,sidoo kalena looga fadhiyo inay keenan xubnihii u matali lahaa kuraasta aqalka sharci dejinta Somalia sanadaha afarta ee soo socda.
Shabaab oo ku hanjabtay weeraro
Gudi Saraakiil ah oo tagay Baladweyn
''Puntland 5 sanno ka hor iyo maanta farqi baa u dhaxeeya''